बिदेश Archives | Page 13 of 23 |
२०७५, ९ बैशाख आईतवार २०:०७ April 22, 2018 ताजा खबरबिदेश
३५ वर्षकी आमाले घरकै कोठामा पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । महिलाका ६ वर्षका छोरा पंखामा झुण्रिहेको आमाको लाशसँगै ३ दिनसम्म बसे । उनी त्यहीँ छेउमै सोफामा सुते । बालकले आमाको आत्महत्याबारे बाहिर कसैलाई बताएनन् । ३ दिनपछि लाश गलेर दुर्गन्ध…
२०७५, ९ बैशाख आईतवार २०:०० April 22, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी। वेश्यालयको इतिहास उत्तिकै पुरानो छ जति पुरानो हाम्रो संस्कृति छ । कैयौं देशहरुमा वेश्यावृत्तिले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ भने केही देशमा आज पनि वेश्यावृत्ति गैरकानुनी छ । तर एउटा ठाउँ यस्तो पनि छ जहाँ वेश्याहरु यौन सम्पर्कको लागि आफ्ना…
२०७५, ९ बैशाख आईतवार ०८:१० April 22, 2018 ताजा खबरबिदेश
भारत । भारत सरकारले बालिकामाथि बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनलाई शनिबार अनुमोदन गरेको छ । हालै भारतको जम्मु काश्मिरमा एक आठ बर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटना र भारतमा दैनिक करिब ५० जनाको दरमा बलात्कारका घटना हुन थालेपछि सरकारले बलात्कारीलाई…
सामूहिक बलात्कारका लागि साथीहरुलाई छोरी उपहार ! पितासमेत बलात्कारमा संलग्न
२०७५, ६ बैशाख बिहीबार १७:०७ April 19, 2018 ताजा खबरबिदेश
लखनउ । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित सीतापुर जिल्लामा मानवतालाई नै कलंकित गर्ने एक घटना प्रकाशमा आएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार ५० वर्षीय एक पुरुषले सामूहिक बलात्कारका लागि साथीहरुलाई आफ्नी छोरी ‘उपहार’ दिएर आफूसमेत बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी कारवाही अघि बढाइएको छ…
पत्नीलाई सहमतिविना पनि यौनसम्पर्क गर्न सकिने, अब बलात्कार नठहरिने
२०७५, २ बैशाख आईतवार ११:३९ April 15, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी । पतिले पत्नीको सहमतिविना यौनसम्पर्क राखेमा पतिले वैवाहिक बलात्कार गरेको नठहरिने भारतको एक अदालतले ठहर गरेको छ । गुजरातको उच्च न्यायालयले पत्नी १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर भए उनको सहमतिबेगर गरिने यौनसम्पर्कलाई वैवाहिक बलात्कार मान्न नसकिने जनाएको हो । पतिले…
२०७५, २ बैशाख आईतवार १०:१८ April 15, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी । मानिसहरु कम पढे–लेखा भएको देशमा बलात्कारको घटना बढी हुने जनविश्वास छ । तर, यस्तो सोच्नु गलत हो । एक आँकडाका अनुसार अमेरिकादेखि न्युजिल्याण्ड जस्ता देशमा समेत महिला सुरक्षित छैनन् । हामी तपाईंलाई विश्वका ५ देशबारे जानकारी दिन गइरहेका…
सीरियामा रासायनिक आक्रमण, ४० को मृत्यु
२०७४, २५ चैत्र आईतवार ११:३३ April 8, 2018 ताजा खबरबिदेश
बीबीसी। सीरियाको डोमा सहरमा विषालु ग्यासको आक्रमणबाट ४० जनाको मृत्यु भएको राहतकर्मीको बनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपी अमेरिकी विदेश विभागले मृत्यु हुनेको संख्या ४० भन्दा निकै धेरै हुन सक्ने बताएको छ। पूर्वी गुटामा विद्रोहीको कब्जामा रहेको डोमा अन्तिम…
बलात्कारको बदला बलात्कार ! पीडितका दाजुले पीडककी बहिनीलाई मिलापत्रका नाममा गरे बलात्कार
२०७४, १५ चैत्र बिहीबार १३:२३ March 29, 2018 ताजा खबरबिदेश
इस्लामावाद, चैत १५ । बलात्कारका घटना कहालीलाग्दो गरी बढ्न थालेका छन् । यसै क्रममा बलात्कार पीडित युवतीका दाजुले पीडकको परिवारसँग मिलापत्रका नाममा बलात्कार गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ । यो घटना पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तको हो, जहाँ प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न तथा…
२०७४, १५ चैत्र बिहीबार १२:५६ March 29, 2018 ताजा खबरबिदेश
भेनेजुएला । भेनेजुएलाको भ्यालेन्सिया सहरस्थित एउटा प्रहरी चौकीमा भएको दङ्गा र आगलागीको घटनामा परी कम्तीमा ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । थुनुवाहरूले भाग्ने प्रयासमा म्याट्रेसहरूमा आगो लगाएपछि आगलागी सुरु भएको बताइएको छ । थुनुवाका आफन्तहरूले धुँवाले निसास्सिएर धेरै जनाको मृत्यु…
किम जोङ र जिनपिङको भेटले दुनियाँमा हलचल, के भयो कुराकानी ?
२०७४, १४ चैत्र बुधबार १४:४८ March 28, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले चीनको भ्रमण गरेको औपचारिक पुष्टी भएको छ । केही दिनयताको अनुमानलाई चिर्दै चिनियाँ समाचारसंस्था सिन्हुवाले उत्तर कोरियाली नेता किमले चीनको भ्रमण गरेको पुष्टी गरेको हो । यो सन् २०११ मा कार्यभार सम्हालेयता…